किन आयो- ‘गलबन्दी’का गायक प्रकाश सपुतलाई आईजिपी खनालको फोन ? यस्तो रहेछ, भित्री कारण (भिडियो हेर्नुस) – सुदूरखबर डटकम
किन आयो- ‘गलबन्दी’का गायक प्रकाश सपुतलाई आईजिपी खनालको फोन ? यस्तो रहेछ, भित्री कारण (भिडियो हेर्नुस)
काठमाडौं- करिब एक वर्षअघि गायक सपूतले ल्याएको गीत ‘बोल माया’ ले सांगीतिक क्षेत्रमा ठूलै उथलपुथल ल्याएको थियो । परदेसिएका पतिको शव कफिनमा बन्द भएर आएपछिको अवस्थामा विरह भाकामा व्यक्त उक्त मार्मिक लोकगीतले धेरैको मन छोयो ।
त्यसपछि ‘गलबन्धी’ बजारमा ल्याएका सुपतको यो गीत शब्द र भाका र पृथक् प्रस्तुती अनि म्युजिक भिडियोले यो गीत धेरैले मन पराएका छन् । गीत सार्वजनिक भएसँगै यो गीत ब्याकग्राउण्ड राखेर बनाइएका थुप्रै ट्रोल ले पनि गीत धेरै जना समक्ष पुर्याउनमा ठुलो मदत गर्यो । छिल्लो समय युट्युवमा ट्रेन्डिङ नम्बर वानमा रहेको गीत गलबन्दीका गायक प्रकाश सपुतलाई नेपाल प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले फोन गरेर यस्तो भनेको खुलाए । पकाशले सर्वेन्द्र खनालले फोन गर्नुको कारण खुलाए । भिडियो हेर्नुस